Featured – စာမကျြနှာ 8 – Healthy Life Journal
ဆီးချိုရှိသူ ပျားရည်သောက်လို့ရပါသလား၊ ပျားရည်ကို နေ့စဉ်သောက်ရင် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ပါသလား
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—- ပျားရည်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပျားရည်ကစစ်လား၊ မစစ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တကယ့်ပျားရည်အစစ်သာဆိုရင် Glycemic Index ကနည်းတယ်။ ပျားရည်ကလည်းစစ်မယ်၊ ပျားရည်သောက်တဲ့ ပမာဏကလည်း မများဘူးဆိုရင် ဆီးချိုသမားလည်း သောက်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် တစ်ရက်ကို...
အအန်ပျောက်ဆေးများ (Anti Emetics)
……………..၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊……………. ပျို့ချင်-အန်ချင် ဖြစ်သည်မှာ လက္ခဏာတခု ဖြစ်သည်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်စေပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်၊ ခရီးသွားစဉ်၊ ၀မ်းလျှောဝမ်းပျက်စဉ် အန်ခြင်းတို့အပြင် အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သည်းခြေအိတ်ရောဂါများ၊ အစားအလွန်အကျွံစားခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဦးခေါင်းအားထိခိုက်မိခြင်း၊ ဦးနှောက်ထဲအကျိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်း၊ အစာအိမ်လေနာ၊...
အရိုးပါးရောဂါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ၊ ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ
——၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊——- အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်ရင် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရိုးသိပ်သည်းဆက ကျကျလာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အသက်ကြီးလာရင် ခါးနာတယ်၊ ဒူးနာတယ် . .ဒါတွေအားလုံးက အရိုးပါး/အရိုးပွရောဂါ (Osteoporosis) ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်ရင်...
အားဖြည့်အချိုရည် အသောက်များပြီး သွားအားလုံးနီးပါး ပျက်စီးသွားသူ
—————၊ ကိုထက် ၊—————- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသူ အသက်၂၁ နှစ်အရွယ် ဗင်းနိုင်းဟာ အမြဲနိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်နေဖို့အတွက် ကဖင်းဓာတ်နဲ့ သကြားတွေအများအပြား ပါဝင်တဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်ကို သောက်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ဗင်းနိုင်းဟာ ကျောင်းတက်ပြီး ဒုတိယနှစ်မှစပြီး နေ့ရောညပါ နိုးကြားနေစေဖို့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေကို ပိုပိုပြီး...
သင်အလုပ်ချင်ဆုံး အလုပ်အမျိုးအစားက ပြောပြနေသည့် သင့်အကြောင်း
————-၊ ကိုထက် ၊————— ကလေးဘ၀တုန်းက ” သားလေးကြီးရင် ဘာလုပ်မှာလဲ” ၊ ” သမီးလေးကြီးရင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ” ဆိုတာတွေ မေးခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။ ကြီးလာတဲ့အခါ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်က တထပ်တည်းကျခဲ့ရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဆရာ၊...
တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားနှင့် မီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Q. သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအကြောင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ A. HPV ပိုးကို ကြွက်နို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ လက်၊ လိင်အင်္ဂါတွေမှာ ကြွက်နို့ပေါက်တတ်လို့ပါ။ HPV ပိုးက အမျိုးအစားပေါင်း...
—————–၊ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား)၊—————- စာရေးသူရဲ့ မိတ်ဆွေကိုတာနဲ့ စာမေးပွဲဖိစီးမှုဒဏ်အကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့ ကိုတာက မှတ်ချက်ချပါတယ်။ “စာမေးပွဲဖိစီးမှုဒဏ်ထက် ပိုပြီးဆိုးရွားတာက စာမေးပွဲပြီးရင် အပျော်ကြူးကြတာပဲဗျ” “ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ” “မနှစ်က ဂိုးကို့စ်မြို့တော်မှာ စာမေးပွဲပြီးလို့ အပျော်ခရီးထွက်လာတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးမူးပြီး ၆...